Uninzi lwabasetyhini abangazange balinde ixesha lokuya esikhathini bayazibuza-ngaba kukulibaziseka okanye ukukhulelwa? Uninzi olungqiqweni, ngokuqinisekileyo, uya ku-gynecologist okanye uthathe uvavanyo lokukhulelwa ekhaya, kodwa akunakwenzeka njalo.
<- - - [xa gte mso 9] - -> < - - [xa gte mso 10] - ->
Ngaba zikhona ezinye iindlela zokuqinisekisa ukuba ukhulelwe okanye akunjalo?
Imiqondiso yabantu malunga nokuqala kokukhulelwa
Okokuqala, kukho imiqondiso yokukhulelwa. Ezi zibandakanya: okukuqala, oku kubambezeleka kokuya esikhathini, isifuba, ukunyamezela kweenxeba zakhe kunye nokwenyuka, i-colostrum ibonakala, ukugula kwasekuseni, ukuhlanza, utshintsho kwintlawulelo, idonsa kwi-salted okanye emuncu, utshintsho lwesondlo, ukukhathala nokugwenxa, ukuvuthwa rhoqo. Imiqondiso enjalo ayilunganga, ngokuqhelekileyo iimpawu ezinjalo zibonwa ngaphambi kokuya esikhathini. Ukongezelela, abaninzi abafazi malunga nokukhulelwa kwangaphambili baqala ukuba neentloni, kunokuvalelwa kwesicaphulo kunye nezinye iimpawu ezinxulumene nezizathu zengqondo. Kodwa ukulibaziseka kwimihla kungabandakanyeki nokukhulelwa okusemandleni. Kukho ezinye iimeko ezinokuchaphazela i-ovulation, kwaye emva koko ukulibaziseka kwimihla. Ezi zibandakanya - uxinzelelo, ukuhamba, izifo, amayeza, ukuhamba, ukuzivocavoca, utshintsho lwemozulu, ngokungaguquki kwenguqu yokuguquka, umzekelo, emva kokutya okude.
Ngokuchanekileyo, indlela yokufumanisa ukuba ukhulelwe okanye akunjalo ukulinganisa ukushisa kwe-basal. Abasetyhini abaninzi basasebenzisa le ndlela eyaziwayo yokukhetha ukukhulelwa. Kule nto kufuneka ufunde umjikelezo wakho wokuya esikhathini kwaye uqaphele ngokutsha ishati yokushisa. Unokuqiniseka ngokuqala kokukhulelwa ukuba umkhuhlane uhlala ngaphezu kweentsuku ezintathu ukuthelekiswa nesigaba esiqhelekileyo somzimba ophuzi - oku kuhamba kwisigaba sokuhamba emva kokuya kwimihla yokuqala, esichazwe ngamaqondo aphezulu, kweli nqanaba izinga lokushisa lingaphezulu kwama-37 degrees. Ukuba ubude besigaba lunemihla engama-12, kwaye kumjikelezo othile uye waba iintsuku ezili-16, ithuba lokukhulelwa liphezulu kakhulu. Kufuneka kuqatshelwe ukuba isigaba sokuqala, ukuba umjikelo ungagqithanga, unokuba nobude obuhlukeneyo, kwaye isigaba somzimba ophuzi sinozinzile kwaye sihlala iintsuku eziyi-12-14. Kubalulekile ukuba ungayigcinanga yonke umjikelo, kodwa isigaba sesibini sesigxina. Ixesha lokujikeleza liyahluka kakhulu ngenxa yesigaba sokuqala. Ukuphakama kwamathuba okukhulelwa xa iqondo lesithathu laphezulu lokushisa livela xa kukho izigaba ezimbini kumjikelezo, kodwa oku akukwenzekayo kuwo onke amabhinqa, njengoko itshati yokushisa yazo zonke ihlukile. Ukuba kukho ngaphezulu kwe-18 ukushisa okuphezulu kubonakala ngokulandelelana, oku kubonisa ukuba ukhulelwe.
Kukho abafazi abafunda ukuba bakhulelwe, kuphela ngenyanga emva kokukhulelwa. Kodwa ukwazi iindlela ezilula zokumisela ukukhulelwa, oku kungafundwa kwangaphambili. Iimpawu eziphambili ezibonisa ubukho bokukhulelwa - ukulibaziseka kokuya esikhathini, ukulala, umbala weengubo zeentsontsho, isifuba sesifuba, isifo se-toxicosis, isiyezi, ukwanda kokuphuma kwisini. Ama-30% amabhinqa ahamba kunye nokuya esikhathini, nangona ukukhulelwa, kodwa isabelo asininzi kwaye sininzi. Ukubonakala kweempawu ezinjalo kuboniswa utshintsho lwe-hormones kumzimba.
Kwiendlela ezithandwayo zokumisela ukukhulelwa ekhaya, sinokuquka iindlela zogogo-ugogo, ezo ndlela zenzeke ngaphezu kwekhulu leminyaka, ezinye zidibanisa okanye zinyani, kodwa zikhona iindlela ezinengqiqo. Zininzi iindlela, kodwa qwalasela ezinye zazo. Ngaphambili, ootata babilisa umchamo, ukuba umfazi ukhulelwe, oku kuya kubonakala ngokubonakala kweentlanzi emva kokubilisa. Ibhinqa lalibhekwa likhulelwe ukuba isisu saye saqina. Ukugwetywa ngamaphupha: ukuba ubona intlanzi ephilayo okanye i-melon yamanzi ephupheni, ngoko umfazi "kwindawo ekhangayo", ukuba i-perch okanye i-crucian iphupha - ukuzalwa kwenkwenkwana, kwaye ukuba i-pike okanye i-herring, ngoko kuzalwa kwentombazana.
Indlela eqhelekileyo yomntu wokumisela ukukhulelwa kukuxuba umchamo kunye nokulahla kwe-iodine. Ukuba ugawula i-iodine kumchamo, kufuneka uchithe ngokupheleleyo - ngoko ke, lo mfazi ukhulelwe. Ukuba umntwana engalindelanga umntwana, i-drop will be on the surface. Kufanelekile ukuba sicinge ukuba le ndlela ayisebenzi, ukuba uhlola.
Indlela elula ayifuni nantoni na, yodwa umzimba wakho. Kubalulekile ukuba alale phantsi aze aphumule, kumgama wama-7-8 amentimitha ngaphantsi kweenamba zokubeka izandla zakhe esiswini. Xa unokuziva uvuke - ulinda umntwana, mhlawumbi - awukhulelwe. Ayaziwa ukuba le ndlela ichanekile okanye ayikho. Kukholelwa ukuba ukuba umfazi ukhulelwe, unesifo somkhuhlane, oomama abanamava babiza inani elichanekileyo-ukusuka kwi-37 ukuya kwi-37.2 degrees. Ukukholelwa iimpawu zomntu, inkcazo yokukhulelwa kubonisa ukhenketwa okwandisiweyo kulwalamano olusondeleyo, olungazange lubonwe ngaphambili.
Ukukhulelwa kwamiselwa njani kumaxesha amandulo?
Ugqirha kunye nefilosofi ye-Ancient Greece iGippocrates wacebisa izigulane zakhe ngendlela enjalo yokumisela ukukhulelwa ngamayeza omntu. Ngaphambi kokuba ulale, kufuneka ulungise isisombululo sewayini kunye nobusi kwaye uyayiphuza, okanye udle ubuncinci bezinyosi nge-anise. Ukuba ibhinqa inentlungu esiswini kwisisu ebusuku, oku kubonisa ukukhulelwa. Umlobi ophakathi, owayehlala eItali, wanikela ngale ndlela yokumisela ukukhulelwa: umfazi uvelisa umlilo, ungeze imore kunye nesiqhumiso aze avuselele kunye naye. Ukuba ibhinqa lilindele umntwana, iphunga leqhumiso nemore liza kubonakala kuye. Kukho enye ingcebiso evela kwiincwadi eziphakathi. Umlambo waseMasa uthengiswa kwisitya kunye nenxalenye ye-1: 1 uthele iwayini kuwo. Ngokumalunga nokukhulelwa komfazi kuya kuxela ukungafihli kwamanzi.
Kukho kwakhona iimpawu zesizwe zokukhulelwa, ezizahlula zabafazi abakhulelweyo.
Owesifazane okhulelwe udla ngokutshiza i-salted, ebona ukugula kwasekuseni, umnqweno wokulala. Indlela yokutya yowesifazane iguquka. Ngamana ungadla ngokuthanda izitya ezintsha kwaye uyeke ukuthanda inkohlakalo. Njengoko uyakubona, ukukhulelwa kungagqalwa nje ngooncedo lovavanyo, kodwa kunye nezilwanyana zomntu.
Iindlela zokulungisa izilwanyana zabantu
Ukuphulukisa iipropati ze-coriander
Unyango lwe-lumbar osteochondrosis ngeendlela zomntu
Iziphumo zobunxila obusetyhini
Ubusuku boKarnival, iqela
Abantu abadala bahlala kunye nabafana abaselula
Iidraphi zokupheka iitapile
Iphazili yokucinga okungaqhelekanga, ixazululwa ngumntu oyedwa kuphela kwi-1000. Ngaba unako?
Ikhekhe le-Cheese kwi-multivark
I-barley yeParele kunye nama-mushroom e-porcini kunye nemifuno
I-allergies evela kwiinwele zeewele
Ukuqonda okuchanekileyo kwenkcubeko yesondlo kwimpilo yemihla ngemihla
Iincwadi zeentlanga zorhwebo zaseRashiya
Inkathazo yokuthetha ngentetho
Isityalo seJasmine yangaphandle